ရှာဖွေပါ - ဒါက keto လား။
© 2022 ဒါက ကီတိုလား။
ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို ရှာကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးအစားများမှတဆင့်.
ကီတိုအစားအသောက်ကို အခုမှစပြီး ဘယ်ကနေစရမှန်းမသိဖြစ်နေပါသလား။
keto diet သို့မဟုတ် ketogenic diet ဆိုတာဘာလဲ။
keto diet စတင်ရန် အခြေခံအချက် ၉ ချက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်းပါးများဖြင့် ဤဗီဒီယိုများ၏ အကြောင်းအရာကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည်-
Keto Diet - ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသော Ketogenic အစားအသောက်အတွက် နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်.
Beginners အတွက် မရှိမဖြစ် Keto အကြံဥာဏ် ၉ ခု.
Keto Fruits - အဆုံးစွန်သောလမ်းညွှန်
အကယ်၍ သင်သည် keto diet ကို အချိန်အတော်ကြာအောင် စားသောက်နေပါက၊ သင်သည် အသီးအနှံများ ချို့တဲ့နေနိုင်သည်။ လူအများစုက ယူဆတယ်...
အီစထရိုဂျင် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှု အကြောင်းရင်း ၅ ချက်နှင့် ၎င်းကို ပြောင်းပြန်လှန်နည်း
ဟော်မုန်းအတက်အကျများကို သိရှိရန်ခက်ခဲသည်။ လက္ခဏာများသည် မကြာခဏဆိုသလို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်အပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ သိမ်မွေ့ပြီး သင့်စက်ဝန်းနှင့်အတူ ပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်...
Keto ရှိ Kombucha- အကြံကောင်းတစ်ခုလား ဒါမှမဟုတ် ရှောင်သင့်သလား။
ခန့်မှန်းပါရစေ။ မင်းရဲ့ဒေသခံစတိုးဆိုင်မှာ Kombucha ကိုတွေ့ဖူးပြီး မင်းသူငယ်ချင်းက ဒီအကြောင်းပြောနေတာကို ရပ်မနေဘူး။ အဲဒါကို သင်တောင် စမ်းကြည့်ဖူးတယ်။ အခု မင်းမှာ...
Keto Wines - ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောဝိုင်များအတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းပါးသော သို့မဟုတ် ကီတိုအစားအစာကို စတင်သောအခါတွင် လူအများစုမေးလေ့ရှိသည့် အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမှာ- သင်ရော…
Keto နှင့် Gout - Keto Diet သည် Gout ရောဂါလက္ခဏာများကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
အသား၊ ငါး ​​သို့မဟုတ် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအသားများကို စားပါက၊ ဤ keto-ဖော်စပ်သော အစားအစာများသည် ဂေါက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို တိုးမြင့်စေသလားဟု တွေးတောမိပေမည်။ ဉာဏ်ပညာ...
Keto Activated Charcoal လား။ ဤဖြည့်စွက်စာသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
လူများစွာသည် activated carbon ကိုစိတ်လှုပ်ရှားကြသည်။ ဤဖြည့်စွက်အားဆေးသည် အဆိပ်ထုတ်ခြင်း၊ အစာအိမ်ကျန်းမာရေး၊ သွားဖြူစင်ခြင်းနှင့် အခြားအရာများအတွက် ကူညီပေးသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဲဒါတွေ…
"ငါ ketosis မဖြစ်သေးဘူးလား" Keto Dieters များကြားတွင် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ketosis သို့ဝင်ရန်အချိန်သည်သင်၏အချိန်ဇယားပေါ်တွင်မူတည်သည်...
Ghee Butter (ရှင်းလင်းထားသော ထောပတ်)- စစ်မှန်သော စူပါအစားအစာ သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း လှည့်စားခြင်း
သန့်စင်သောထောပတ်ဟုလည်းသိကြသော Ghee သည် ရာစုနှစ်များစွာကြာ အိန္ဒိယဟင်းချက်ခြင်းတွင် အဓိကကျသည်။ ဆေး၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
နောက်ဆုံးထွက် ဟင်းချက်နည်းများ ထည့်ထားသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော Keto Green Smoothie ချက်နည်း
ketogenic အစားအသောက်ကို လိုက်နာခြင်းသည် သင့်တစ်နေ့တာတွင် အသား၊ ဒိန်ခဲနှင့် ထောပတ်များ ပြည့်နေသည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီထက်​မပိုနိုင်​ဘူး...
4 ပါဝင်ပစ္စည်းများ Low Carb တိမ်တိုက်ပေါင်မုန့်ကြော်
မုန့်အများကြီးစားချင်လား စိတ်မပူပါနဲ့၊ မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ketogenic diet သည် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် လျှော့စားခြင်းကို ဆိုလိုသောကြောင့်၊
20 မိနစ် Keto အမည်းရောင်ကြက်သားကြော်
အမည်းရောင်ကြက်သားဟင်းချက်နည်းများကို ယေဘူယျအားဖြင့် သကြားပါသော အမည်းရောင်ရှိသော ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကာ အခြားဘာကို သိနိုင်မည်နည်း။ ဤ keto ဗားရှင်း ...
Keto နှင့် Low Carb Velvety Pumpkin Pie ချက်နည်း
အားလပ်ရက်များ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ နောင်လာမည့်စုဝေးပွဲများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် သင်လုပ်နိုင်သော ကီတိုအချိုပွဲကို ၎င်းတို့က မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဒီ...
Valentine's Day အတွက် Red Velvet Low Carb၊ Keto နှင့် Gluten-Free Donuts ကြော်နည်း
မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တစ်ခုခုကျင်းပဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလား။ ချစ်သူများနေ့ (သို့) နှစ်ပတ်လည်နေ့ (သို့) ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အခမ်းအနားတစ်ခု ရောက်ရှိလာပါက သင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်သည်...
18 Keto ကြက်ဥမပါသောနံနက်စာချက်ပြုတ်နည်းများ
ကြက်ဥမပါသော keto နံနက်စာသည် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ကြက်ဥများသည် ketogenic အစားအစာအတွက် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ အဆီ ၅ ဂရမ်၊ ၆ ဂရမ်...
Christmas Gluten-Free Ketogenic Gingerbread Cookie ချက်ပြုတ်နည်း
အားလပ်ရက်ရာသီ ကုန်ဆုံးသွားသောအခါတွင် သင်သည် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသော အစားအစာဖြစ်သောကြောင့် သင်အကြိုက်ဆုံး ခရစ္စမတ် ကွတ်ကီးများကို လက်မလွှတ်သင့်ပါ။ ...
မိနစ် 30 အတွင်း Keto ကြက်သား Tikka မဆလာကြော်
ကြက်သား tikka masala သည် အနောက်တိုင်းတွင် လူကြိုက်အများဆုံး အိန္ဒိယဟင်းလျာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာဟင်းချက်နည်းကတော့ ထမင်းနဲ့ နန်ပေါင်မုန့်တို့နဲ့ ကျွေးပါတယ်...
Keto သည် Arrowroot ဖြစ်ပါသလား။
အဖြေ- Arrowroot သည် ၎င်း၏ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် မြင့်မားမှုကြောင့် ကီတို လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ မျှင်ပေါက် သို့မဟုတ် မြှားပေါက်ကို Maranta Arundinacea ဟုခေါ်သော အပူပိုင်းအပင်မှ ထုတ်ယူသည်။ ဒီအပင်ကို မူလက...
Keto Tapioca လား။
အဖြေ - တာပီယိုကာသည် keto မဟုတ်ပါ။ ကစီဓာတ်ပါဝင်မှု အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလွန်မြင့်မားသည်၊ သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းသည်သင့်အား ketosis မှဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အဆိုပါ…
Keto La Yuca လား။
အဖြေ - ပီလောပီနံသည် keto ဆန်ဆန်မဟုတ်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ သူ့မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များလွန်းတယ်။ မြေအောက်မှာ ပေါက်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အများစုလိုပဲ။ Keto တွင် ပီလောပီနံကို ရှောင်သင့်သည်...
Keto Cornmeal သို့မဟုတ် ပြောင်းဖူးမှုန့်လား။
အဖြေ- ပြောင်းဖူးမှုန့်ဟုလည်းသိကြသော ပြောင်းမှုန့်သည် ကီတိုမဟုတ်သလို keto အစားအသောက်များတွင် ဂျုံမှုန့်အတွက် အစားထိုးအဖြစ်လည်း တရားဝင်သည်မဟုတ်ပေ။
အဖြေ- အုန်းလတ်တစ်လုံးလျှင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် 2,8g ဝန်းကျင်ပါဝင်ပြီး အုန်းသီးသည် အလွန်အကျွံမစားဘဲ keto တွင် စားသုံးနိုင်သော အသီးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အုန်းသကြား keto လား။
အဖြေ- အုန်းသကြား သို့မဟုတ် အုန်းထန်းသကြားကို ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သကြားအဖြစ် လူအများက အကဲဖြတ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ keto မပါတဲ့အတွက်...
tagatose အချိုဓာတ်က keto လား။
အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့။ Tagatose သည် keto ကိုသဟဇာတဖြစ်စေသောသင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကိုမမြှင့်တင်ပေးသော glycemic index0ပါရှိသောအချိုဓာတ်ဖြစ်သည်။ တဂါတို...
နနွင်း keto လား။
အဖြေ- နနွင်းသည် keto လောကတွင် လူကြိုက်များပြီး အကြောင်းပြချက်ကောင်းဖြစ်သည်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အချို့ပါရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်...
မြေပဲဆီ keto လား။
အဖြေ - မြေပဲဆီသည် keto လုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းသည် သင့်ကျန်းမာရေးကို များစွာထိခိုက်စေနိုင်သော ပြုပြင်ထားသော အဆီတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ တခြားရွေးချယ်စရာတွေ ရှိသေးတယ်…
acai keto လား။
အဖြေ- Acai သည် ဘရာဇီးတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသော ဘယ်ရီသီးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါရှိပေမဲ့ အားလုံးနီးပါးက အမျှင်ဓာတ်တွေမို့...
Keto သည် Good Dee ၏ Cookie Mix ဖြစ်ပါသလား။
အဖြေ- Good Dee's Cookie Mix တွင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အချို့ပါရှိသော်လည်း၊ သင်၏ ketogenic အစားအစာတွင် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၎င်းကို အလယ်အလတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Keto Cheesies Crispy Cheese Snack တွေလား။
အဖြေ- Cheesies Crispy Cheese Snack များသည် ကီတိုနှင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ကင်းစင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ ketogenic အစားအစာတွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ အဆိုပါ…
Adonis လိမ္မော်နှင့် နနွင်းအရသာ Crunchy Brazil Nut Bars Keto လား။
အဖြေ- Adonis လိမ္မော်ရောင်နှင့် နနွင်းအရသာ Crunchy Brazil Nut Bars များသည် keto dieters များအတွက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Adonis Coconut အရသာ Crunchy Pecan Bars Keto လား။
အဖြေ- Adonis Coconut Crunchy Pecan Bars တွင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်2ဂရမ်သာရှိသည်။ ဒါကြောင့် ပမာဏနည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေမှာ ထည့်သွင်းစားသုံးနိုင်ပါတယ်...
Adonis Vanillia အရသာ အုန်းသီး အတောင့်လိုက် အတုံးများ Keto လား။
အဖြေ- adonis vanillia အနံ့အရသာရှိသော အုန်းသီးအတုံးများသည် သင့် keto diet တွင် အနည်းငယ်သာ စားသုံးနိုင်သော အသားတင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသော သရေစာဖြစ်သည်။...
Aneto 100% သဘာဝ အမဲသားဟင်းရည် Keto လား။
အဖြေ- Aneto 100% Natural Meat Broth သည် အပြည့်အဝ ketogenic ကြိုတင်ချက်ပြုတ်ထားသော ဟင်းရည်ဖြစ်သည်။ အရိုးဟင်းရည်သည် keto အသိုင်းအဝိုင်းမှ အမှန်တကယ်နှစ်သက်သော ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပါဝင်ကူညီကြတယ်...
"ဒီ keto" ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ။
စာသင်ပြီးရင် 2014 ခုနှစ်တွင် Madrid ၏ Complutense တက္ကသိုလ်မှ လူသားအာဟာရနှင့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ၊ စံမဟုတ်သော အစားအသောက် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ ခေါင်းစဉ်ကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားလာသည်။ သူတို့ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို နာမည်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ keto အစားအသောက် အဲဒါက 2016 လောက်ကစတယ်။ မင်းဘာမှ စလုပ်တုန်းကလိုပဲ၊ မေးခွန်းပင်လယ်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အဖြေကို သွားရှာရတယ်။ ယင်းတို့သည် သတင်းအချက်အလက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖတ်ရှုခြင်း (သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများ၊ အထူးပြုစာအုပ်များစသည်) နှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုတို့မှ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ကျွန်မအတွက် အံ့သြစရာလို့ထင်ရတဲ့ ရလဒ်အချို့နဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါ အချို့သောအစားအစာများ (အထူးသဖြင့် အချိုဓာတ်များ) အစားထိုးခြင်းက ကျွန်မကို အချို့သော additives စားသုံးမှု အလွန်မြင့်မားတဲ့အပြင် ထုတ်ကုန်အသစ် အစုံအလင်ကို ရရှိစေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကို ယူဆောင်လာပေးသော သူများအတွက် စတင် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ keto အစားအသောက်။ စျေးကွက်က မြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအစားထိုး အစားစာတွေ ဒါမှမဟုတ် တိကျတဲ့ အစားအစာတွေကို ငါလေ့လာကြည့်တော့ အားလုံးက ကီတိုလို မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တချို့က တော်ရုံတန်ရုံ စားသုံးသင့်တယ်လို့ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို စုဆောင်းသွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒေတာဘေ့စ် ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လူများစွာအတွက် အမှန်တကယ် မှန်ကန်ပြီး အသုံးဝင်သော အချက်အလက်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်လာသည်။ ဤနည်းဖြင့် မွေးဖွားသည်။ esketoesto.com. တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင့်တွင် သတင်းကောင်းများ ရနိုင်စေရန် ကျန်းမာပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် keto အစားအသောက်ကို လိုက်နာပါ။.
ဤအစားအစာသည် 1920 ခုနှစ်များတွင် ကလေးဘ၀တွင် ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကို ကုသရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ၎င်း၏ အံ့အားသင့်ဖွယ် အောင်မြင်မှုနှုန်းကြောင့်- keto အစားအသောက် အတွေ့အကြုံကို စားသူများ၊ ၆၀% မှ ၇၀% အကြား ဖမ်းယူမှု နည်းပါးလာသောကြောင့် ဤနယ်ပယ်တွင် ယနေ့တိုင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့နဲ့ ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ယေဘူယျအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူဦးရေအတွက်ရော ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအလွန်နိမ့်သော ကစီဓာတ်နှင့် အဆီများသော အစားအစာများကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမည်။
ကီတိုအစားအစာတွင် အဆီအလွန်များပါသည် (သင့်စုစုပေါင်းကယ်လိုရီ၏ 80% ခန့်)၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အလွန်နည်း (သင့်ကယ်လိုရီ၏ 5% အောက်)၊ နှင့် ပရိုတင်းတွင် အလယ်အလတ် (များသောအားဖြင့် သင့်ကယ်လိုရီ၏ 15-20%)။ ၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အကြံပြုထားသော macronutrient ဖြန့်ဖြူးမှုမှ ကြီးမားသောသွေဖည်မှုဖြစ်သည်- ပရိုတင်း 20% မှ 35%၊ 45% မှ 65% ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အဆီ 10% မှ 35%။
Keto Diet ၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းမှာ ketosis ဟုခေါ်သော ပုံမှန် သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်သည် ဂလူးကို့စ်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်က ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို ဖြိုခွဲတဲ့အခါ ဂလူးကို့စ်ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် နှစ်သက်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လျှော့စားတာ ဒါမှမဟုတ် အချိန်အကြာကြီး မစားရသေးတဲ့အခါ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ကွာဟချက်ဖြည့်ဖို့ တခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေပါတယ်။ အဆီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် စားသုံးမှုနည်းတဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ ဆဲလ်တွေက အဆီတွေကို ထုတ်လွှတ်ပြီး အသည်းကို ပြည့်လျှံစေပါတယ်။ အသည်းသည် အဆီများကို စွမ်းအင်အတွက် ဒုတိယရွေးချယ်မှုအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ketone ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။
Keto Diet ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
Keto Diet သည် လွယ်ကူသည်မဟုတ်သော်လည်း သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုချက်အရ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုခြင်းထက် အကျိုးကျေးဇူးများရှိကြောင်း၊ keto Diet သည် ကုသမှုများတွင် တိုးတက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေပုံပေါ်သည်။
အယ်လ်ဇိုင်းမား- ketogenic အစားအစာကို လိုက်နာသော အယ်လ်ဇိုင်းမားလူနာများသည် မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတွင် သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်မှုရှိကြောင်း သိပ္ပံပညာက အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းသည် ဦးနှောက်အား လောင်စာအသစ်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် mitochondrial လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆရသည်။
ပါကင်ဆန်- ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ alpha-synuclein ဟုသိကြသော ပရိုတင်းများ ပုံမှန်မဟုတ်စွာ စုပုံနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Michael J. Fox ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထောက်ပံ့သော သုတေသနသည် ketogenic အစားအစာတစ်ခုသည် ဦးနှောက်အတွင်းရှိ alpha-synuclein ပမာဏကို လျှော့ချပေးပြီး ယင်းပရိုတင်းများကို ပြိုကွဲစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်ဆိုသည်ကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။
Multiple sclerosis: 2016 ခုနှစ်မှ လေ့လာမှုငယ်တစ်ခုတွင်multiple sclerosis (MS) လူနာများသည် keto diet တွင်ရှိခဲ့သည်။ ခြောက်လအကြာတွင် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူနေမှုဘဝပုံစံနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဆရာဝန်များနှင့် သုတေသီများသည် keto နှင့် multiple sclerosis အကြားဆက်စပ်မှုကို မရှာဖွေမီ၊ ပိုကြီးသောနမူနာများနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ပဏာမရလဒ်များသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည်။
ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ ဤရောဂါအမျိုးအစားအတွက်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို ၎င်းတို့၏ အနိမ့်ဆုံးဖော်ပြမှုအထိ လျှော့ချခြင်းသည် စံနှုန်းဖြစ်သည်။ Keto Diet ကို မှီဝဲခြင်း၏ ရေရှည်အကျိုးဆက်များကို အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ပြသမှုတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အလွန်သေးငယ်သောနမူနာများကိုယနေ့အထိသုတေသနပြုခဲ့သော်လည်း၊ အလွန်အမင်းကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောအစားအစာ (ထိုကဲ့သို့သော keto အစားအစာကဲ့သို့) သည် A1C ကိုလျှော့ချရန်နှင့်အင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို 75% အထိတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများကအကြံပြုသည်။ တကယ်တော့, 2017 တည်းဖြတ်မှု keto အစားအသောက်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဂလူးကို့စ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု လျော့နည်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ရလဒ်များသည် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်း သို့မဟုတ် ketone ပမာဏ မြင့်မားခြင်းကြောင့် ဖြစ်မဖြစ် မရှင်းလင်းကြောင်း စာရေးသူ သတိပေးခဲ့သည်။
ကင်ဆာ: အစောပိုင်းစမ်းသပ်သုတေသနပြုချက်အရ keto အစားအစာသည် အကျိတ်ကြီးထွားမှုအတွက် ကယ်လိုရီစုစုပေါင်းစားသုံးမှု (နှင့် လည်ပတ်နေသောဂလူးကို့စ်) ကို လျော့နည်းစေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ တစ်ထဲမှာ 2014 ပြင်ဆင်ချက် တိရိစ္ဆာန်သုတေသနမှ ketogenic အစားအစာကိုလျှော့ချရန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အကျိတ်ကြီးထွားမှု, အူမကြီးကင်ဆာ, အစာအိမ်ကင်ဆာ y ဦးနှောက်ကင်ဆာ. ပိုမိုကြီးမားသောနမူနာများဖြင့် လူသားသုတေသနပြုရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အစမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ keto အစားအသောက်တွင် အဆီ၊ ပရိုတင်းနှင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် စားသုံးမှုပမာဏတွင် ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ ၎င်းသည် မတူညီသော keto အစားအစာ အမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ကိုင်တွယ်ရန် မတူညီသောနည်းလမ်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရလေ့ရှိသည်-
စံ keto အစားအသောက် (DCE)- ဤသည် keto အစားအသောက်၏ ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်ပြီး အလွန်မြင့်မားသော အဆီ၊ အလယ်အလတ်ပရိုတင်းစားသုံးမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆီ 75%၊ ပရိုတင်း 20% နှင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် 5% ပါဝင်ပါသည်။
မြင့်မားသောပရိုတိန်း keto အစားအစာ- စံအစားအစာနှင့်ဆင်တူသော်လည်းပရိုတိန်းပိုမိုပါဝင်သည်။ အဆီ 60%, ပရိုတင်း 35% နှင့် 5% ဘိုဟိုက်ဒရိတ်။
သံသရာ keto အစားအသောက် (DCC)- ဤသည်မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် စားသုံးမှု ပိုများသော ရာသီချိန်များ ပါဝင်သည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် တစ်ပတ်ကို5ရက်ဆက်တိုက် keto ရက်အဖြစ် ပိုင်းခြားကာ ကျန်2ကို ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ketogenic အစားအသောက် (DCA)- သင်လေ့ကျင့်သွားသည့်နေ့များတွင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ထည့်နိုင်စေပါသည်။
လက်တွေ့မှာ စံ keto နှင့် ပရိုတင်းဓာတ်များသော အစားအစာများသာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာမှုများရှိသော်လည်း လက်တွေ့တွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဗားရှင်းများကို အဆင့်မြင့်နည်းလမ်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး အားကစားသမားများက ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်။
ဤဆောင်းပါးနှင့် ဝဘ်ပေါ်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့်၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်သည် DCE (Standard keto diet) နှင့် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
keto diet မှာ ကိုယ်အလေးချိန် အတော်လေး မြန်မြန်ကျနိုင်သလား။
ကျွန်တော်က အဆီကျတဲ့ကလေးပါ။ သေချာပေါက် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားတယ်လို့ သူတို့က ပြောဖူးတယ်။ အကျိုးဆက်? ကျွန်မက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပါ။ ဒါက ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ ရှုထောင့်တွေကို တော်တော်ထိခိုက်စေတယ်။ ကျွန်တော် အသက် 17 နှစ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာတယ်။ အဲဒါက လူသားတွေရဲ့ အာဟာရနဲ့ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်ကို လေ့လာခဲ့တယ်။ ဘွဲ့ဒုတိယနှစ်ကို ပြန်ရောက်တော့လည်း ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒါက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မှာ ငါ့ဘဝအပေါ် တကယ်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ အဆီဓာတ်ထိန်းသူကို ဘယ်သူယုံမှာလဲ။
ဒီတော့ အဖြေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်လျှင် keto အစားအသောက်. လွန်လွန်ကဲကဲ အံ့ဖွယ်ကောင်းသည့်အရာ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်မရှိသောအကြောင်းများကို ငါပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သုတေသနပြုချက်များအရ သင်သည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့် ပိုများပါက၊ မြင့်မားသောအဆင့် သို့မဟုတ် ပုံမှန်အစားအသောက်များထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်သာမန်“ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပြီး အချို့သောရောဂါများ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေအချက်များကို လျော့နည်းစေသည်။
ထို့အပြင်၊ သင်သည် တစ်နေ့တာလုံး ကယ်လိုရီရေတွက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် သင်စားသည့် ပမာဏကို ပြည့်စုံစွာ ခြေရာခံခြင်း ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုများအရ keto အစားအသောက်ကို လိုက်နာသူများသည် ကယ်လိုရီနှင့် အဆီများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်သူများထက် ကိုယ်အလေးချိန် ၂.၂ မှ ၃ ဆ ပိုများသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုထင်ရသော်လည်း triglycerides နှင့် HDL ကိုလက်စထရောအဆင့်များမှာလည်း တိုးတက်မှုကိုပြသသည်။
ထို့အပြင်၊ ပရိုတင်းစားသုံးမှုနှင့် သကြားဓာတ်များ လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် keto အစားအစာသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကဲ့သို့သော အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ (ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းထက်) ပေးသည်။
အခြေခံအားဖြင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အလွန်များသော သူများ။ ဥပမာ:
သကြားပါဝင်မှုမြင့်မားသော အစားအစာများနှင့် အချိုရည်များ- အချိုရည်များ၊ ဖျော်ရည်များ၊ ဖျော်ရည်များ၊ သကြားလုံးများ၊ ရေခဲမုန့်များ စသည်တို့။
စီရီရယ်များ၊ ဂျုံမှုန့်နှင့် ဆင်းသက်လာအများစု- ခေါက်ဆွဲ၊ ဆန်၊ စီရီရယ် စသည်တို့။
အသီး: ဘယ်ရီသီးအများစုမှလွဲရင် အသီးအနှံအားလုံး၊ စတော်ဘယ်ရီ, ဘလက်ဘယ်ရီ, ဂူဗာ, Plum, Raspberry, etc
ပဲ သို့မဟုတ် ပဲပင်များ ပဲမျိုးစုံပဲ၊ပဲ၊ကုလားပဲ၊ပဲစေ့ စသဖြင့်၊
အမြစ်နှင့်ဥ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ- ကန်စွန်းဥ၊ မုန်လာဥနီ၊ အာလူးစသည်တို့။
အစားအသောက် သို့မဟုတ် အဆီနည်းသော ထုတ်ကုန်များ- ၎င်းတို့ကို အလွန်သတိထားပါ။ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ပြီး ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝပါသည်။
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ သို့မဟုတ် ငံပြာရည်များ- ၎င်းတို့ကို မှန်ဘီလူးဖြင့်လည်း ကြည့်ရပါမည်။ အများစုမှာ သကြားနှင့် ပြည့်ဝဆီများ အလွန်များသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပြည့်ဝဆီများ- keto အစားအစာသည် အဆီစားသုံးမှုအပေါ်အခြေခံသော်လည်း သန့်စင်ပြီးဆီများတွင် ပုံမှန်ပြည့်ဝပြည့်ဝဆီများ သို့မဟုတ် mayonnaise ကို ကန့်သတ်ရန် လိုအပ်သည်။
အရက်- ၎င်း၏သကြားပါဝင်မှုသည် အမှန်တကယ် အလွန်မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့် keto diet တွင် ၎င်းကို လုံးဝဖယ်ရှားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
သကြားမပါသောအစားအစာများ - ဤနေရာတွင်လည်းသင်အလွန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ အချိုဓာတ်အားလုံးသည် keto အစားအစာအတွက်မသင့်လျော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒီနေရာမှာ အသုံးအများဆုံး အချိုဓာတ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပါပြီ။. အစားအသောက်မပျက်ဘဲ ဘယ်ဟာတွေ စားလို့ရလဲ သိနိုင်မှာပါ။
Keto Diet မှာ ဘယ်လိုအစားအစာတွေစားနိုင်လဲ။
Keto Diet ကို အဓိကအားဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
အသားများ- အနီရောင်၊ အမဲသား၊ ဆာရာနိုဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဘေကွန်၊ ကြက်ဆင်၊ ကြက်သား၊ ဟမ်ဘာဂါ အသား စသဖြင့်
အဆီများသောငါး- ဆော်လမွန်၊ တူနာ၊ ငါး၊ မက်ကရယ် အစရှိသည်တို့၊
ဒိန်ခဲ- cheddar၊ mozzarella၊ ဆိတ်ဒိန်ခဲ၊ အပြာကဲ့သို့သော အဓိကအားဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံပါ။
အခွံမာသီးများနှင့် အစေ့အဆန်အမျိုးအစား အခွံမာသီးများ- ဗာဒံစေ့များ၊ သစ်ကြားသီးအမျိုးမျိုး၊ ရွှေဖရုံစေ့များ၊ chia အစေ့များ စသည်တို့။
မပြုပြင်ရသေးသောဆီများ- သံလွင်ဆီ၊ အုန်းသီးနှင့် ထောပတ်သီးဆီ။
ထောပတ်သီး- တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော guacamole။ ဝယ်ရင် ဘာမှ ထပ်မထည့်မိအောင် စစ်ဆေးရပါမယ်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုနည်းသော အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပြင် ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ငရုတ်ကောင်း စသည်တို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။
ပုံမှန်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ- ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ စသည်တို့။
keto diet ကို မရှောင်ဘဲ အပြင်ထွက်စားပါ။
အခြားအစားအစာအမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲ၊ keto အစားအသောက်တွင်၊ အိမ်အပြင်ဘက်အစားအစာများသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိပါ။ လက်တွေ့အားဖြင့် စားသောက်ဆိုင်များအားလုံးတွင် အသားနှင့်ငါးကဲ့သို့သော keto-friendly ရွေးချယ်စရာများကို သင်ခံစားနိုင်သည်။ ဆယ်လ်မွန်ကဲ့သို့ အဆီများသော ribeye သို့မဟုတ် အဆီများသောငါးကို မှာယူနိုင်ပါသည်။ အသားကို အာလူးနဲ့ တွဲစားရင် ပြဿနာမရှိပဲ အသီးအရွက်အနည်းငယ်နဲ့ အစားထိုးခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥပါသော အစားအစာများသည် omelet သို့မဟုတ် bacon နှင့် ကြက်ဥကဲ့သို့ ကောင်းမွန်သော အဖြေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အလွန်ရိုးရှင်းသောဟင်းမှာ ဟမ်ဘာဂါဖြစ်သည်။ ပေါင်မုန့်ကို ဖယ်ထုတ်ရုံဖြင့် ထောပတ်သီး၊ ဘေကွန်ဒိန်ခဲနှင့် ဥများကို အပိုအဖြစ်ထည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။
မက္ကဆီကန်လို သာမာန်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလည်း ဘာပြဿနာမှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ မည်သည့်အသားကိုမဆို မှာယူနိုင်ပြီး ဒိန်ခဲ၊ guacamole နှင့် ဆားဆာ သို့မဟုတ် အချဉ်မုန့် ကောင်းကောင်းပမာဏကို ထည့်နိုင်ပါသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့နှင့် ဘားတစ်ခုတွင် အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သည် ပြဿနာရှိမည်မဟုတ်ပေ။ တစ် ကိုကာကိုလာ ၀ယ်တယ်။သို့မဟုတ် Diet Coke အခြား ဆိုဒါ သို့မဟုတ် သကြားမပါသော nestea များသည် လုံးဝ keto ဖြစ်သည်။ ကော်ဖီကိုလည်း ပြဿနာမရှိဘဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဤအရာအားလုံးဖြင့်၊ ရလဒ်များသည် အခြားအစားအစာများနှင့် မတူကြောင်း သင်တွေ့နိုင်သည်။ လုံးဝလုံခြုံမှုရှိသောကြောင့် အပြင်ထွက်စားသောအခါတွင် အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရရန် မလိုအပ်ပါ၊ သင်၏ keto အစားအသောက်ဖြင့် အမှန်တကယ်ပျော်စရာကောင်းသော ရွေးချယ်မှုများကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်အများစုကဲ့သို့ပင်၊ keto အစားအသောက်အစတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို သင်ခံစားရနိုင်သည်။ ဒါက လုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် အချို့သောနည်းလမ်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုပြီး ၎င်းကို သင်ပြောင်းလဲနေပါသည်။ မကြောက်ရဘူး။ Keto Diet သည် ကျန်းမာရေးကောင်းနေသူများ အတွက် လုံးဝ ဘေးကင်းပါသည်။
အချို့က ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခေါ်သည်- keto တုပ်ကွေး.
ဤ keto flu ဟုခေါ်သော များသောအားဖြင့် စွမ်းအင်အဆင့်ကို ကျဆင်းစေသည်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသော တွေးခေါ်မှု ခံစားချက်၊ ဆာလောင်မှု တိုးလာခြင်း၊ အစာခြေဖျက်ခြင်း နှင့် အားကစားတွင် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းများ ဖြစ်စေသည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း, keto flu သည် မည်သည့်အစားအသောက်ကိုစစားသောအခါတွင်ခံစားရသည့် ခံစားမှုနှင့်မျှမတူပါ။ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပျောက်သွားပါသည်။
ဒီသက်ရောက်မှုတွေကို သက်သာစေဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုကတော့ ပထမအပတ်အတွက် ပုံမှန်အစားအစာကို ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏကို သိသိသာသာ လျှော့ချဖို့ပါပဲ။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကို လုံးဝစွန့်လွှတ်ခြင်းမပြုမီ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆီလောင်ကျွမ်းမှုဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကီတိုအစားအစာသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ရေနှင့် သတ္တုဓာတ်များကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည်။ ထို့ကြောင့် အစားအစာများတွင် ဆားအနည်းငယ်ထပ်ထည့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်ဆန္ဒရှိပါက သတ္တုဓာတ်ဖြည့်စွက်စာများ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ဆိုဒီယမ် 3.000 မှ 4.000 မီလီဂရမ်၊ ပိုတက်စီယမ် 1.000 မီလီဂရမ်နှင့် တစ်နေ့လျှင် မဂ္ဂနီဆီယမ် 300 မီလီဂရမ် စားသုံးခြင်းသည် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကာလအတွင်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျော့ပါးစေပါသည်။
အထူးသဖြင့် အစပိုင်းတွင် လုံး၀ပြည့်မပြည့်မပြည့်မကျက် စားသောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကယ်လိုရီကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ကီတိုအစားအစာသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကယ်လိုရီထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။ ဒါပေမယ့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် သက်ရောက်မှုရှိအောင် ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ အစပိုင်းမှာ အစာမငတ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ အဲဒါက မင်းကို ထိန်းသိမ်းတာ ပိုထိရောက်မယ်။
ketogenic အစားအစာသည် ကျွန်ုပ်အတွက် ကောင်းသောအကြံဖြစ်ပါသလား။
အစားအစာအားလုံးကဲ့သို့ပင် keto အစားအသောက်နှင့်မသင့်တော်သောလူများရှိသည်။ ketogenic diet သည် အဝလွန်သူများ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူ သို့မဟုတ် ဇီဝဖြစ်စဉ်ကျန်းမာရေးနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် တိုးတက်လိုသူများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။. ဒါပေမယ့် အားကစားသမားတွေ ဒါမှမဟုတ် ကြွက်သားတွေ ကိုယ်အလေးချိန်အများကြီးတက်ချင်သူတွေအတွက်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။
ထို့အပြင်၊ မည်သည့်အစားအစာနှင့်မဆို၊ သင်အလေးအနက်ထား၍ တသမတ်တည်းရှိနေပါက၊ ၎င်းသည် အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရလဒ်များသည် ကာလလတ်-ရေရှည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အစားအသောက်ကို ပြေးတာက ခရီးဝေးပြိုင်ပွဲပါ။ လွယ်လွယ်နဲ့ယူရမယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ၊ သင်သည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကိုယ်အလေးချိန်ကို အချိန်အတော်ကြာအောင် မထားခဲ့ပါ။ 15 ရက်အတွင်း အဲဒါတွေအားလုံးကို ဆုံးရှုံးချင်နေတာ (မကျန်းမာဘူး)။
ဒါတောင်မှ အထက်ဖော်ပြပါ အားလုံးကို ဆင်ခြင်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရာမှာ ထိရောက်မှု နဲ့ keto Diet နဲ့ ပါလာတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ က အာဟာရမှာ သက်သေပြထားတဲ့ အရာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ်။
ငါဒီအစားအစာကိုအကြံပြုခဲ့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ။ အရာခပ်သိမ်းကဲ့သို့ပင်၊ ငါရှင်းလင်းရန်ကြိုးစားမည့် အစောပိုင်းကာလနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်း ပျံ့နှံ့နေသောသံသယအချို့ရှိသည်။
ငါ ကြွက်သားတွေ ဆုံးရှုံးသွားမှာလား။
အစားအစာအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ကြွက်သားထုထည်လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ သို့သော် ပရိုတင်းဓာတ် ပမာဏသည် ပုံမှန်အစားအစာများထက် ပိုများပြီး ketone အဆင့်မြင့်မားခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေ ဆုံးရှုံးမှုသည် များစွာနည်းပါးပြီး အချို့သော ကိုယ်အလေးချိန်များကို သိသိသာသာပင် မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
Keto Diet တွင် ကျွန်ုပ်၏ကြွက်သားများကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကစီတို အစားအသောက်က အလယ်အလတ် ကစီဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာထက် ဒီအတွက် ထိရောက်မှုနည်းတယ်။
ဒါပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် အစားအသောက်၏ အခြေခံဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အနည်းဆုံး ပထမ ၂ လ သို့မဟုတ် ၃ လအတွင်း အနည်းဆုံး စားသုံးသင့်သည်။ ထိုအချိန်ကာလပြီးနောက်၊ သင်သည် အထူးအချိန်များတွင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို စားနိုင်သော်လည်း ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ပရိုတင်းဓာတ်ကို အလယ်အလတ်ပမာဏနဲ့ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းသည် အင်ဆူလင်ကို မြင့်တက်စေပြီး ketones များကို ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ အကြံပြုထားသည့် ကန့်သတ်ချက်မှာ စုစုပေါင်းကယ်လိုရီ၏ 35% ဖြစ်သည်။
မောပန်းခြင်း သို့မဟုတ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းများကို အမြဲခံစားရသည်။
သေချာပါတယ်၊ သင်ဟာ နည်းလမ်းမှားနဲ့ အစားအသောက်စားနေတာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အဆီနဲ့ ketones တွေကို မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ အသုံးမပြုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကစီဓာတ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချပြီး စောစောက ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ အကြံဉာဏ်ကို ဆက်လုပ်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကူညီရန်အတွက် TMC ဖြည့်စွက်စာများ သို့မဟုတ် ketones များကိုလည်း သောက်နိုင်ပါသည်။
ketosis သည် အလွန်အန္တရာယ်များကြောင်း မှန်ပါသလား။
အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ ketoacidosis အယူအဆနှင့် ketosis အယူအဆကို ရောထွေးနေသူများ ရှိပါသည်။ Ketosis သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်သောဆီးချိုရောဂါတွင် ketoacidosis ပေါ်လာသည်။
Ketoacidosis သည် အန္တရာယ်ရှိသော်လည်း ketogenic အစားအစာအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် ketosis သည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး လုံးဝကျန်းမာသည်။
အစာမကြေခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဝမ်းချုပ်ပါက ငါဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်3သို့မဟုတ်4ပတ်အကြာတွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဆက်ရှိနေရင် အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ အသီးအရွက်တွေကို စားကြည့်ပါ။ ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေဖို့ မဂ္ဂနီဆီယမ် ဖြည့်စွက်စာကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဆီးက သစ်သီးနံ့တွေ ရနေတယ်။
စိတ်မပူပါနှင့်။ ဤသည်မှာ ketosis ကာလအတွင်းထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များကိုဖယ်ရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သဘာဝသစ်သီးအရသာရှိသော ရေများများသောက်ပါ သို့မဟုတ် သကြားမပါသောပီကေကို ဝါးစားကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို အခါအားလျော်စွာ အားဖြည့်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
မလိုအပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်ထက် ကယ်လိုရီများတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းက အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် Keto အချိုပွဲများ
Keto Halloween Frosted Cookies ချက်နည်း
Keto Diet Macro Meal Planner ကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
နောက်ဆုံးထွက် Keto ချက်ပြုတ်နည်းများ
Ketogenic၊ Low Carb၊ Sugar Free နှင့် Gluten Free "Sugar" Cookie ကြော်နည်း
Keto ခရင်မ်သံပုရာအတုံးများ စာရွက်
Keto and Sugar Free Cake Batter ရေခဲမုန့်ကြော်
Keto ကိတ်မုန့်စိမ်း ကွတ်ကီးစာရွက်
လွယ်ကူသော Keto Squash Bars ကြော်
© Copyright 2022 ဒါက ကီတိုလား။ All rights reserved ။
ဤပေါ်တယ်၊ esketoesto.com ၏ပိုင်ရှင်သည် Amazon EU Affiliate Program တွင်ပါဝင်ပြီး တွဲဖက်ဝယ်ယူမှုများမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏လင့်ခ်များမှတစ်ဆင့် Amazon တွင် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ၎င်းသည် သင့်အား ဘာမှကုန်ကျမည်မဟုတ်သော်လည်း Amazon သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဝဘ်ဘဏ္ဍာရေးကူညီမည့် ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။ / buy / segment ကိုအသုံးပြုသည့် ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော ၀ယ်လင့်ခ်များအားလုံးကို Amazon.com ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ Amazon လိုဂိုနှင့် အမှတ်တံဆိပ်သည် Amazon နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။